Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Sady tsy misy lalàna no tsy misy fanjakana !
Inty sy Nday: Sady tsy misy lalàna no tsy misy fanjakana !
Mbola misy olom-pirenena Malagasy ve na vahiny mandalo na mpanara-baovao any ivelany ka mihevitra fa milamina sy mandry fahalemana ny tany sy ny firenena eto Madagasikara amin’izao fotoana ?
Azo antoka fa tsia no valiny.
Toa mamendrofendro izahay raha hitanisa ny tranga isehoan’ny tsy fandriam-pahalemana manenika ny firenena amin’izao fotoana. Amin’ny endriny rehetra no isehoan’izany: vono olona, fandrobana, fanafihana mitam-piadiana, halatra madinidinika, sinto-mahery, sakan-dalana, famakiana trano, fanodinkodinaa volam-panjakana, halatra fitaovam-panjakana, fakana an-keriny (kidnapping), vaky fasana sy halatra taolam-balo, halatra fitaovam-piangonana, sy ny maro tsy ho voatanisa e !
Tena toy ny tanv tsy misy fanjakana eto, satria ny fanjakana no voalohany tompon’andraikitra amin’ny fitandroana ny filaminana sy ny fiarovana ny aina sy ny fananan’ny vahoaka. Ny fanjakana no manana ny fahefana hanatanteraka ny fepetra takian’izany. Ny fanjakana no manana ny vola hiatrehana ny fifehezana an’izany tsy fandriam-pahalemana izany. Ny fanjakana no manana ny olona manana ny traikefa sy ny fahaizana ara-teknika (mpitandro filaminana) hiantoka ny fampanjakana ny fandriam-pahalemana… Tsy vita anefa izany. Toy ny tany tsy misy lalàna koa eto satria ny mahavanon-doza amin’izany rehetra izany, rehefa tsy afaka fotsiny eny amin’ny fitsarana dia ianjadian’ny fitsaram-bahoaka. Ny lalàna dia misy fa ny fampiharana azy no tsy vita na tsy efan’ny tompon’andraikitra. Manjaka koa ny kolikoly ka ny ratsy sy ny manam-bola no mahazo vahana. Mampalahelo fa hatramin’ny mpitandro filaminana no voaroban’ny olon-dratsy na matin’izy ireny mihitsy aza. Tsy azon’ny saina visavisaina ange izany satria ny mpitandro filaminana tokony hiantoka ny fandriam-pahalemana no lasa voafehin’ny jiolahy sy ny olon-dratsy ? Mampalahelo koa moa fa misy amin’ireny mpitandro filaminana ireny (izay vitsy dia vitsy) no miara-miombona antoka amin’ny olon-dratsy ka ny mpitandro filaminana namany ihany indraindray no ianjadian’ny asa-maloton’izy ireny. Ny vahoaka moa dia tena valala voatango e! Very fanahy mbola velona.
Dia hiandry an’iza àry isika amin’izany ? Hiandry ny mpamatsy vola avy any ivelany ve ? Tsia. Isika vahoaka no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fitadiavana vahaolana satria isika no tompon-draharaha, ka ny dingana voalohany tsy azontsika angatahana andro intsony, mba hahafahana mametraka ny tena tany misy fanjakana sy tany tan-dalàna eto dia ny manongotra an’izay rehetra misakantsakana antsika vahoaka tsy ho afaka mandray an-tanana ny ho avintsika sy tsy ahafahantsika miantoka ny fampandriana fahalemana ny fiainantsika. Ny mpitondra fanjakana tsy mahavita ny andraikiny no voalohany tsy maintsy sokajiana ho fahavalom-bahoaka manome vahana ny tsy fandriam-pahalemana ka tokony andraisan’ny vahoaka fepetra.